တတ်ကျွမ်းထားတဲ့ ပညာနဲ့ ပြည့်သူ့အကျိုးသယ်ပိုးခဲ့တဲ့ မောင်ဖြစ်သူ စိန်ဖြိုးလှိုင်အတွက် ဂုဏ်ယူကြောင်းပြောလာတဲ့ နန္ဒာလှိုင် – အောငျနိုငျသူ
Aung Naing Thu | November 16, 2020 | Cele News | No Comments
ဒီကနေ့ ဖောင်ကြီးဆေးရုံမှာ တာဝန်ပြီးဆုံးလို့ ပြန်ရောက်ရောက်ချင်း မိခင်ကို သွားရောက်နှုတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ဒေါက်တာစိန်ဖြိုးလှိုင်
စိန်ဖြိုးလှိုင်ကတော့ ယခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာဆိုရင် သူသင်ကြားထားတဲ့ ဆေးပညာရပ်ကို အသုံးချပြီးတော့ ဝိုင်းဝန်းတိုက်ဖျက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။
စိန်ဖြိုးလှိုင်က လူနာတွေကိုလည်း မေတ္တာ၊စေတနာနဲ့ကုသပေးပြီး အမြန်ဆုံးသက်သာလာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။နန္ဒာလှိုင်တို့မိသားစုနဲ့ ချစ်သူရီရီပွင့်ဖြူတို့ကလည်း စိန်ဖြိုးလှိုင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို လေးစားပြီး
နောက်ကနေပံ့ပိုးပေးနေတာပါ။ဒေါက်တာစိန်ဖြိုးလှိုင်ကတော့ ဖောင်ကြီးဆေးရုံမှာ အလုပ်တွေပင်ပန်းပေမယ့်လည်း အမြဲပျော်ပျော်နေပြီးတော့ တခြားဆရာဝန်၊သူနာပြုတွေနဲ့လည်း ခင်မင်ရင်းနှီးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ မောင်ဟာ ဖောင်ကြီးဆေးရုံမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့အတွက် အိမ်ကိုပြန်လာပြီလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖောင်ကြီးဆေးရုံမှာ တစ်လ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာကြောင့် အိမ်ကိုပြန်လာပေမယ့်လည်း သူ့အခန်းမှာ
နှစ်ပတ် Quarantine နေရဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။စိန်ဖြိုးလှိုင်ကတော့ ဖောင်ကြီးမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်လို့ ပြီးတာနဲ့ ရောက်ရောက်ချင်း အမေဖြစ်သူကို သွားတွေ့ခဲ့တာပါ။
အမဖြစ်သူ နန္ဒာလှိုင်က စိန်စိန်ပြန်လာပါပြီ မေမေ့ကိုလာနှုတ်ဆက်ပြီးသူ့အခန်းမှာနှစ်ပတ်နေရပါမယ် ပြီးမှအိမ်ပြန်လာပါမယ်Congratulations! ဒေါက်စိန် ဆိုပြီး စိန်ဖြိုးလှိုင်ပုံလေးတွေနဲ့ တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။credit
Unicode…ဒီကနေ့ ဖောငျကွီးဆေးရုံမှာ တာဝနျပွီးဆုံးလို့ ပွနျရောကျရောကျခငျြး မိခငျကို သှားရောကျနှုတျဆကျခဲ့တဲ့ ဒေါကျတာစိနျဖွိုးလှိုငျ
စိနျဖွိုးလှိုငျကတော့ ယခုလိုကိုဗဈကာလမှာဆိုရငျ သူသငျကွားထားတဲ့ ဆေးပညာရပျကို အသုံးခပြွီးတော့ ဝိုငျးဝနျးတိုကျဖကျြပေးနတောဖွဈပါတယျနျော။
စိနျဖွိုးလှိုငျက လူနာတှကေိုလညျး မတ်ေတာ၊စတေနာနဲ့ကုသပေးပွီး အမွနျဆုံးသကျသာလာအောငျ စှမျးဆောငျပေးနတောဖွဈပါတယျနျော။နန်ဒာလှိုငျတို့မိသားစုနဲ့ ခဈြသူရီရီပှငျ့ဖွူတို့ကလညျး စိနျဖွိုးလှိုငျရဲ့စိတျဓာတျကို လေးစားပွီး
နောကျကနပေံ့ပိုးပေးနတောပါ။ဒေါကျတာစိနျဖွိုးလှိုငျကတော့ ဖောငျကွီးဆေးရုံမှာ အလုပျတှပေငျပနျးပမေယျ့လညျး အမွဲပြျောပြျောနပွေီးတော့ တခွားဆရာဝနျ၊သူနာပွုတှနေဲ့လညျး ခငျမငျရငျးနှီးနပွေီပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီနမှေ့ာတော့ မောငျဟာ ဖောငျကွီးဆေးရုံမှာ တာဝနျထမျးဆောငျပွီးတဲ့အတှကျ အိမျကိုပွနျလာပွီလဲ ဖွဈပါတယျ။ ဖောငျကွီးဆေးရုံမှာ တဈလ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့ရတာကွောငျ့ အိမျကိုပွနျလာပမေယျ့လညျး သူ့အခနျးမှာ
နှဈပတျ Quarantine နရေဦးမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။စိနျဖွိုးလှိုငျကတော့ ဖောငျကွီးမှာ တာဝနျထမျးဆောငျလို့ ပွီးတာနဲ့ ရောကျရောကျခငျြး အမဖွေဈသူကို သှားတှခေဲ့တာပါ။
အမဖွဈသူ နန်ဒာလှိုငျက စိနျစိနျပွနျလာပါပွီ မမေကေို့လာနှုတျဆကျပွီးသူ့အခနျးမှာနှဈပတျနရေပါမယျ ပွီးမှအိမျပွနျလာပါမယျCongratulations! ဒေါကျစိနျ ဆိုပွီး စိနျဖွိုးလှိုငျပုံလေးတှနေဲ့ တငျထားတာပဲဖွဈပါတယျနျော။credit
ဓားအစစ်သုံးပြီးတော့ ဓားနဲ့အထိုးခံရတဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းမှာ မတော်တဆထိခိုက်သွားတဲ့ သရုပ်ဆောင် ခန့်သီရိဇော်
သူ့ကို ကြိုက်သော်လည်း အနုပညာကြေးမြင့်လို့ စဉ်းစားနေတဲ့ သားအဖရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ် ဆိုတဲ့ ရွှေထူး
အဖွားဆုံးသွားလို့ရွာပြန်ပြီး နောက်ဆုံးအနေနဲ့မျက်နှာလေးကြည့်ချင်တာတောင် ကြည့်ခွင့်မရတဲ့အကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာထုတ်ပြောလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး